आफैलाई गा’ली गर्दै जागिर छोडेका प्रेम संजेल आए मिडियामा, भन्छन: पर्यो भने राजनीतिमा पनि आउन सक्छु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 4, 2021 AdminLeaveaComment on आफैलाई गा’ली गर्दै जागिर छोडेका प्रेम संजेल आए मिडियामा, भन्छन: पर्यो भने राजनीतिमा पनि आउन सक्छु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
विराटनगर । ४० वर्ष बढी निजामती सेवामा रहेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले अबकास लिएका छन । उनले आफैलाई धिक्कार्दै, आ.क्रोशित हुदै जागिरबाट विदा लिएका हुन् । श्रम कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत संजेल बैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगिका घटनामा उनले चालेको कडा कदमको कारण पछिल्लो समय चर्चामा थिए । विशेष गरी उनि भ्रस्टाचार बिरोधि व्यक्ति पनि हुन् । उनले भ्रस्टाचारको मामलामा देश कै प्रमुख व्यक्तित्वहरुलाई समेत चुनौती दिदै आएका छन ।
विक्रम सम्बत २०३९ साल फागुन ३ गते खरिदार हुँदै निजामती सेवा प्रवेश गरेका सन्जेल २०४६ साल असार २७ गते नायब सुब्बमा बढुवा भएका थिए । २०५४ साल कात्तिक १२ गते शाखा अधिकृत भएका सञ्जेल २०६६ साल कात्तिक २९ गते उपसचिवमा बढुवा भएका थिए । आफ्नो उपनाम खतरा राखेका संजेलको बोली जस्तै काम पनि गर्ने हुदा उनलाई निजामति क्षेत्र कै आइडल मानिदै आएको थियो । तर ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सञ्जेलले असार १५ गते अनिवार्य अवकास पाए । तर सुधारको प्रयत्न गर्दा नसकेपछि आफैंलाई गाली गर्दै उनि विदा भएका छन ।
अबकास लिएपछि संजेलले सामाजिक संजालमा विज्ञप्ति सार्बजनिक गर्दै खरो कविता समेत लेखेका छन : स्थायी नोकरीमा मात्र ४० बर्ष ४ महिना ६ दिन नेपाली जनताको सेवा गरी विदा लिएँ (भ्रष्टाचारी,कालो कमाउने)) घुस्याहा,भुस्याहा,छुस्याहा, जँड्याहा,कप्ट्याहा,द्र.ब्यपिसाच, घोसे,घोप्टे,कपटी,चाप्लुसे “घुभुछुजकद्र घोघोकचा” देशमारा, जनताको रगत चुसाहा, अफिसको रगत चुसाहा, कमिसनखोर, कर्मचारीहरु र तिनका दृश्य अदृश्य राजनैतिक सँरक्ष्यकहरु/ र ……….हरु/ जागिरबाट/ सेवाबाट/पेशाबाट/कामबाट/ र ………बाट अवकाश भै/ वा खारेज भै “सँधैको लागि” घर जान बिदा हुँदा जनताको रगत चुसेर भित्री शरिर जुकाको जस्तो रगतले ढाडिएर रातोपिरो पारेर बाहिरी शरिर र “घुस्याहा कालोअनुहार” तत्काल छोप्न आसेपासेद्वारा कालो अनुहारमा अविर दलाएर तथाकथित बिदाई समारोहको “”प्रायोजन”” गर्छन ।
मैले त्यस्तो तथाकथित काम बहिस्कार गर्ने चलन आफैँबाट शुरू गरेँ । स्थायी नोकरीमा मात्र ४० बर्ष ४ महिना ६ दिन नेपाली जनताको सेवा गरी विदा लिएँ ।धन्यबाद । नेपालमा नेता मात्र होईन कर्मचारी पनि उत्तिकै खराब छन । ४० बर्ष जागिर खायो रे । अरुले नगरेको तर तैले गरेको एउटा काम भन त भन्दा अफिस गएर फर्केँ भन्छ । पाए घुस खान्छ । नपाए अफिसको कमिसन खान्छ । भ्रस्टचार गर्छ । बाल बचेरा बिदेशमा पढाउँछ । यस्ताले त भैँसी पालेर बसे कसो होला?स्थायी नोकरीमा मात्र ४० बर्ष ४ महिना ६ दिन नेपाली जनताको सेवा गरी विदा लिएँ ।
नेपालका सबै कर्मचारी साथी,तिमीले आफ्नैदेश सुधार्न के कसम खायौ ? अझैघुस, कमिसन,नजराना,इनाम, बक्सौनि,रिश्वतको नाममा आफ्नैदेश र गरिब नेपाली जनताको रगत चुस्दै छौ? मैले भ्रष्टाचार बिरुद्ध ल.ड्दा जेल,ज्यान र जागिरमाथि हिडने आबश्यक परेका बखत बात,हात र लात चलाउने,समयले जे निर्णय गर्छ,सोही मान्ने कसम खाएर सरकारी जागिर /स्थायी नोकरीमा मात्र नोकरीमा ४० बर्ष ४ महिना ६ दिन नेपाली जनताको सेवा गरी िवदा लिएँ ।धन्यबाद ।
उपत्यकामा असार ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो ! तर २२ गतेबाट सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने, अरु के खुल्छ के खुल्दैन, हे’र्नुहोस् (पुरा आदेश सहित)